Trending Archives - Cyber News
Nov112017 by प्रदिपNo Comments
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ : अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ । १. धन : सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धा
Nov62017 by प्रदिपNo Comments
एक नेपाली युवा जसले बिस्व चकित बनाए (हेर्नुहोस भिडियो)
चरा जस्तै उड्ने यी अचम्मका नेपाली युवाले वल्ड रेकर्ड राखेका छन् । उनलाई अमेरिकाले ५ बर्षको लागि बोलाएको छ । बिश्वलाई नै चकित पार्ने कला बोकेका दिने सुनारको यो भिडियो युटुबमा भाईरल बनिरहेको छ । हेर्नुहोस यो भिडियो
Nov52017 by प्रदिपNo Comments
मृत्युपछि के हुन्छ ? पुनर्जन्मबारे विज्ञानले यसो भन्छ
त्युपछि के हुन्छ ? यो अन्त्यहिन प्रश्नको हो । अहिले सम्म यसको निचोड फेला पर्न सकेको छैन । यद्यपी के मानिन्छ भने, मृत्युपछि हामीले पुन जन्म लिन्छौ । धार्मिक शिद्धान्तले यसै भन्छ । तर, अब विज्ञान पनि यसमा सहमत देखिएको छ । पुनर्जन्मबारे अनुसन्धान यसमाथि विश्वका अनेकन विश्वविद्यालयहरु तथा परामनोवैज्ञानिक अनुसन्धानक केन्द्रहरुले अनुसन्धान गरेका छन् । वर्तमानमा यसलाई फगत एउटा अन्धविश्वास होइन कि वैज्ञानिक तथ्यका रुपमा नै स्वीकारिएको छ । पुनर्जन्मलाई प्रमाणित गर्ने अनेक प्रमाण आज उपलब्ध छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण उर्जा संरक्षणको सिद्दान्त हो । विज्ञानको सर्वमान्य संरक्षण सिद्दान्तका अनुसार उर्जाको कुनै पनि अवस्थामा विनाश हुँदैन, मात्र यसको स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छ । एउटा शरीरबाट अर्कोमा स्थान्तरण जुन प्रकारले उर्जा नष्ट हुँदैन, त्यसैगरी चेतनाको पनि नाश हुँदैन । चेतनालाई वैज्ञानिक शब्दाव
माधव नेपालले सम्झिए मुग्लिनको मासुभात
१८ कात्तिक, काठमाडौं । उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने रकमबारे निर्वाचन आयोगले सीमा तोके पनि संसदीय चुनाव जित्न करोडभन्दा तलको हिसाबै हुन छाडेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष चुनाव लड्नेले पाँच करोडसम्म खर्च गरेको हिसाब सामान्य भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नेको खर्च कति होला ? अनुमान लगाउन गाह्रो छ । आम चुनावमा होमिएका विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुले आफ्नो पार्टीको हेड क्वार्टरबाट चुनाव खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पाउँछन् भने के कति पाउँछन् ? यसबारे हामीले एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी पार्टीको आन्तरिक तयारीबारे बुझ्ने प्रयास गर्‍याैं एमालेको कोषमा एक रुपैयाँ पनि उठेको छैनः नेपाल चुनावी खर्चको कुरा गर्दा एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुग्लिनमा मासुभात खाएको रोचक स्मरण सुनाए । एमालेले चुनावको आर्थिक संकलनका लागि गठन गरेको समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता
कोरियाको एक वेब साइटमा नेपाली नारीका अश्लिल भिडियो छ्यापछ्याप्ति
१ कार्तिक, काठमाण्डाै : कोरियाको एक वेब साइटमामा नेपाली नारीका अश्लिल भिडियो छ्यापछ्याप्ति भेटिन थालेको छ र यो दिनानुदिन बढ्ने क्रममा रहेको छ । नेपाली युवामाफर्त बिदेशबाट चलेको एउटा अश्लिल साईटले नेपालका झण्डै ३ हजार बढि महिलाको अश्लिल दृश्य सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् कि ? कतै उनीहरुसँगै छिल्लिएर भिडियोमा कुराकानी गर्ने बानी छ भने साबधान ! सम्झनुस तपाई अब फस्नु भयो ! अझै तपाई यहि कुराकानीमा नांगिनुभएको छ भने त पक्का हुनुस् तपाईको नांगो शरिर र गोप्य अंगको भिडियो लाखौंले हेरिसक्यो । गएको ४ बर्षदेखी बिभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेका ति भिडियोलाई त्यही अश्लिल साईट मार्फत
साथीको गर्लफ्रेन्डलाइ जंगलमा सामुहिक बलात्कार | हेर्नुस यो भिडियो